iPhone 12 vs Mini vs Pro uye Pro Max - 4 Models Akaenzaniswa - Gadgets
iPhone 12 vs Mini vs Pro uye Pro Max - 4 Models Akaenzaniswa
Hapana chinoratidzika kumisa Apple kana zvasvika pakuvhura mafoni ayo. Kunyangwe hosha yakadzora zuva rekuburitsa, iyo nyowani-nyowani iPhone 12 iri pakupedzisira pano. Ino nguva, Apple iri kutora kuchinjika kwemamodeli kune imwe nhanho. Panzvimbo pemhando mbiri kana nhatu dzesarudzo, iwe unowana mana mamodheru kusarudza pakati.
Pamusoro, iwo akafanana neanozivikanwa musiyano wehukuru. Asi chii chinoita kuti vanyatsosiyana? Ndeipi yaunofanira kufunga nezvayo? Kana iwe uchida kuwana mhinduro dzemibvunzo iyi uye woita sarudzo chaiyo, saka verenga pamwe chete.
Ichi chinyorwa chichawana kuongororwa kwakakodzera kweApple iPhone 12 Models ine fananidzo chaiyo. Izvo hazvitarise mutengo wemutengo asi chaiwo akakosha misiyano mune mana mamodheru. Ngatitangei netafura yekufananidza:
iPhone 12 Models Kuenzanisa Tafura:
Ratidza Saizi 6.1 Inch 5.4 Inch 6.1 Inch 6.7 Inch
Kugadziriswa 2532 x 1170 2340 x 1080 2532 x 1170 2778 x 1284
Pixel Kuwanda 460 PPI 476 PPI 460 PPI 458 PPI
Hupenyu hweBattery 15 Maawa 15 Maawa 17 Maawa 17 Maawa
Kuchengeta Sarudzo 64/128/256 GB 64/128/256 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB
Kamera Yakare Dual (Wide & Ultra Wide) Dual (Wide & Ultra Wide) Katatu (Wide, Ultra Wide & Telephoto) Katatu (Wide, Ultra Wide & Telephoto)
Kumusoro Kamera Yemhando 12 Megapixel (ese ari maviri) 12 Megapixel (ese ari maviri) 12 Megapixel (Ese matatu) 12 Megapixel (Ese matatu)
Mberi Kamera Kuroora (12 MP) Kuroora (12 MP) Kuroora (12 MP) Kuroora (12 MP)
Kurema 164g (5.78 Oz) 135g (4.76 Oz) 189g (6.66 Oz) 228g (8.03 Oz)
Apple yaunza yazvino A14 Bionic chip iyo inovimbisa kuita kwakawanda kwemafoni. Edge-to-edge OLED kuratidza kwakakurumbira mune ese mana mamodheru. Pamusoro pezvo, iwe unowana ceramic nhoo yechiratidziro icho chinozviti chakapetwa kanokwana kukunda kupfuura yapfuura Apple iPhone mamodheru (11 kana kupfuura) Zvese izvi mhando inosanganisira XDR Super Retina Ratidza rwepasi rose kirasi kuita.
Nekudaro, foni yega yega inokuunzira kontrakiti inoshamisa uye iri nani tsananguro yemavara. Iyo pixel density iri inorumbidzwa nechisarudzo chepamusoro chekujekesa kwakanyanya. Yese modhi inobatanidza iyo yehusiku modhi yemakamera inounza yakatenderedza 27% yakawanda mwenje yekujekesa kupfura. Iine chipset nyowani, inoti inopa Dolby Vision mhando yekurekodha.
iPhone 12 Muenzaniso Nhamba (A2172, A2404)
iPhone 12 Models - Zviitiko Paunenge Uchifunga
Kune mashanu akasimba anopedzisa modhi imwe neimwe inowanikwa mukati. Kune siginecha tsvuku, nhema, chena, girini, uye bhuruu inowanika kune mamodheru.
1. IP68 Kupikiswa
Iyo nyowani Apple iPhones inouya neinoshamisa yekudzivirira mvura kugona. Nekudaro, Apple inokukumbira kuti usarambe uchiratidzira kumvura, kunyangwe ichiramba kusvika pamamita mana mumvura kwemaminetsi makumi matatu. Nekudaro, inokupa iwe dziviriro chaiyo pamvura, kuputika kwemvura, uye kumwe kuratidzwa kwakafanana.
Apple iPhones zvakare inowana yakakosha tweak muguruva uye chidimbu kuramba. Iwe unowana chigadzirwa chisingagumi chine vimbiso yemhando imwechete seApple. Apple inojekesa kuti nekufamba kwenguva, kuramba kwacho kunogona kupera sezvazvinoita nechero mudziyo. Nekudaro, IP6X inozivikanwa seyakanyanya mwero isapinda mvura inowanika kumidziyo ye iPhone. Saka iko kuwedzera kunoshamisa.
Iyo smart HDR 3 inowanikwa mune ese mamodheru uye inopa nyore kune vanhu kutora mifananidzo inopinza. Iyo inonunura yakasviba mhando uye inoshandisa muchina kudzidza kugona kwekuita zvirinani mashandiro. Nekudaro, inogona kugadzirisa kupinza, mavara, kupenya, uye mamwe marongero otomatiki. Kana iwe uchida kutora machira kana mifananidzo iri nani-izere, iyo nyowani Smart HDR3 hapana mubvunzo kuti inorumbidzwa.
3. 4K HD Kuita
Iye zvino unogona kunyora mavhidhiyo muDolby Vision kana kutora mifananidzo. Yese modhi inotsigira 4K HD ine sarudzo yakasarudzika pakati pe30 kana 60 fps. Iwe unogona kudonhedza pasi mhando kusvika ku720P padiki. Iyo yakajairika yedhijitari nzvimbo yakatenderedza 3x. Iwe unononoka-mo, panorama, nguva-inopera, cinematic vhidhiyo kugadzikana, uye zvimwe zvakawanda. Nekudaro, iyo yakanakisa foni kune vanogadzira zvemukati pasi rese.
4. MagSafe Kesi Uye Kusajaidza Wisina waya
Apple iri kuyedza kuwedzera chishongedzo chitsva cheMagsafe chinokubvumidza kushandisa magineti kuseri kwe iPhone yako. Iwe unogona kusungira iyo Magsafe iyo inouya mune akasiyana magadziriso uye mavara kuti akwane zvaunofarira. Iko inokutendera iwe kuchengetedza mari kana makadhi echikwereti. Pamusoro pezvo, Magsafe inodzivirirwa kuchengetedza makadhi echikwereti pasina dambudziko.
Kuchaja isina waya ndeyekumhanya kwakanyanya nekugadzirisa otomatiki kune iwo magineti ekugadzirisa kuchaja. Iwe unowana chaiyo mheni chiteshi chengarava neazvino modhi muApple mureza.
iPhone 12 Models Kuenzanisa:
Iye zvino zvatinoziva nezve iPhone 12, ngatitorei zvakadzama kutarisa mune izvo zvinoita kuti yega modhi isiyanane. Pane here musiyano chaiwo pakati peaya mamodheru, kana iri nzira yekutengesa? Ngatitangei nechimwe chinhu Apple isina kuunza kubvira 2016, iyo Apple iPhone 12 Mini:
1. iPhone 12 Mini - Mambo Mudiki
Yange iri nguva yakareba kubva Apple yatanga iPhone diki. Pano iwe une yakapfava iPhone 12 Mini ine 5.7-inch kuratidza. Yayo bezel-shoma dhizaini yakafanana neyakajairwa 4.7-inch kuratidza iyo Apple yaimbozivikanwa kuti inopa. Nekudaro, kana iwe uchinzwa zvishoma nostalgic, ichi chingave chiri chisarudzo chakakodzera.
Iyo iPhone 12 Mini poindi kupa yakaderedzwa iPhone 12 vhezheni ine yakafanana kuita uye simba nhanho. Iyo ine yazvino Bionic chipset ine yakazara hupenyu hwebhatiri uye OLED kuratidza. Iwe unowana mbiri kamera uye inonakidza kuita kwese.
Iyo ine kuratidzwa kweHDR, yechokwadi toni, yakafara ruvara, haptic kubata asi 625 nits mukupenya. Muchidimbu, iyo iPhone 12 Mini ine zvese izvo zvakajairwa iyo iPhone 12 modhi inounza iwe, asi ine muviri mudiki. Ndizvo zvinoderedza mutengo.
Kana iwe uchida iyo iPhone iri yakawanda compact, inotakurika uye inonzwa kunge chaiyo nhare mbozha, iPhone 12 isarudzo yakanaka. Iyo diki saizi haina kudzikira musimba zvachose.
2. iPhone 12 Pro Max - Iyo Grand Sarudzo
Pamusoro, iyo iPhone 12 Pro Max kamera inogona kuita senge yakafanana ne12 Pro, asi pane musiyano wakakura. Nesayizi yakakura, iwe unowana makuru maseru ekamera yekuita zvirinani, kujekesa, uye kupinza. Panzvimbo pe2x Optical Zoom, iwe unowana 2.5x Optical zoom, nekuda kweiyo yakawedzera nzvimbo yekutarisa yeiyo telephoto lens. Pakazara, iwe unovandudzwa kugadzikana kwemufananidzo nekwanisi yekushandisa kamera kune anokwanisa 'peak.
Sarudzo dzekuchengetedza, kubatanidza, uye kuita kwese kwakafanana kune Pro uye Pro Max. Nekudaro, kune yakakosha tweak muhukuru. Iwe unowana 6.7 mainchesi ekuratidzira kukuru, inova imwe yemhando. Nekudaro, iwe unosanganisa ese maficha eiyo iPhone 12 uye unoakudza iwo kune iwo max. Mune mamwe mazwi, Apple iPhone 12 Pro Max zvechokwadi inowedzera kukwezva kwayo.
Kana iwe uchida zvirinani kamera kuita uye kuratidza, saka 12 Pro Max inogona kukoshesa kudyara. Kunze kwaizvozvo, 12 Pro inoita basa racho nemazvo.
Pamusoro, ese mafoni aya anotaridzika kunge akafanana. Ose ane akafanana kuratidzwa, resolution, uye marara madingindira Nekudaro, 12 Pro hapana mubvunzo kuti iri nani vhezheni ine nani bhatiri hupenyu uye 800 nits kupenya, kunyangwe vese vari vaviri vakatakura imwechete pixel density.
iPhone 12 Pro inosanganisa matatu makamera kurwisa iPhone 12's mbiri kumashure kamera. Pro modhi inokomberedza 2x Optical zoom neLIDAR yekujekesa zvirinani, kukurumidza kutarisisa, uye zvirinani yakaderera-mwenje kutora mifananidzo. Nepo mafoni ese ari maviri achitsigira Dolby Vision, iPhone 12 Pro inopa 60 fps nepo standard modhi ichipa 30 fps.
Iwe unowana simbi isina simbi yemutumbi we iPhone 12 Pro, nepo iPhone 12 inoshandisa standard aluminium yakatemwa kukwidza kwepimendi. Pane musiyano wakakosha pakati peyekupinda-chikamu chengetedzo yevaviri, futi. iPhone 12 ine 64 GB yekuchengetedza nemutengo wekutanga, nepo iPhone 12 Pro inopa 128 GB.
Pamutengo wemutengo, mutengo wekuwedzera kwezvinhu ungaratidzika kunge wakawandisa. Zvinogona kunge zviri nani kunangana ne iPhone 12 Pro Max. Nekudaro, kune vechokwadi Apple iPhone vanofarira, kunyangwe aya madiki misiyano anoita akakosha maitiro.
Mutongo wekupedzisira - Ungasarudza Sei?
Kana iwe uchienzanisa iyo nyowani iPhone 12 modhi kune iPhone 11, Apple yakaratidza inoshamisa kusvetuka mukuita uye kukwidziridza kamera. Uku ndiko kusvetuka kwakanyanya kwavakaita, zvinoenderana nezvavanotaura. Nekudaro, kugadzira iyo iPhone 11 isingakoshe mari yacho, kunyangwe nezvikuru zvakadzikisira iyo inowanikwa.
Iyo nyowani-nyowani A14 Bionic Chip inoti ingangoita 50% nekukurumidza kupfuura mafoni anomhanyisa. Hupenyu hwayo hwebhatiri hunofanirwa kunge huri maawa 15-17 ekuridzwa kwevhidhiyo. Iwe unowana isina waya kuchaja uye rutsigiro nezvose zvakapfuura Apple zvishongedzo semachaja, Airpods uye zvakadaro.
Kana iwe ukafananidza iwo mana mamodheru pamwe nemumwe, mutengo wacho ungangodaro usina kukodzera iwo ma tweaks uye shanduko. Kana iwe usina hanya nehukuru hwekuratidzira, ipapo Mini inozadzisa basa reyakajairwa iPhone 12. Zvisinei, kana iwe uchida kuwana zvakanakisa zveiyo iPhone 12, saka iyo Pro Max modhi ndiyo nzira yekuenda. Pane musiyano wakakura pakati pe12 ne12 Pro, kunze kwekukura kwekuratidzira.
Nzira yekuziva sei Fake AirPods Pro?
Yakanakisa VPN yeFireStick (2020) - Super Fast & Yakachengetedzwa
maitiro ekuona terevhizheni mahara
pamusoro gumi mitambo senge minecraft
nzira yekuwana yemahara playstation network mari
akachengeteka mawebhusaiti ekuona mafirimu pamhepo mahara
tarisa zuva rakatarwa pamhepo 123movies